Wakiilka Julian Alvarez Oo U Safraya England Si Uu Wadahadalo Ula Galo Manchester United
HomeWararka CiyaarahaWakiilka Julian Alvarez oo u safraya England si uu wadahadalo ula galo Manchester United
January 3, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Wakiilka xiddiga garabka uga ciyaara kooxda River Plate ee Julian Alvarez ayaa lagu soo waramayaa in uu ku sii jeedo yurub si uu kulamo ula qaato kooxo badan oo xiiso leh.
Isagoo ka qayb qaatay 18 gool iyo lix caawin 21 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan horyaalka heerka koowaad ee Argentina, 21 jirkaan ayaa si dabiici ah u jecel taageerayaal badan oo Yurub ah.
Iyadoo qandaraaskiisu uu dhacayo 12 bilood ka dib, Alvarez ayaa u muuqda inuu u badan yahay inuu beddelo mid ka mid ah labada daaqadood ee soo aaddan iyadoo kooxuhu ay dalbanayaan inay ku guuleystaan ​​tartanka saxiixiisa.
Sida laga soo xigtay saxafiga South America Roberto Rojas , wakiilka Fernando Hidalgo ayaa lagu wadaa inuu shirar ku qabto afar magaalo oo Yurub ah maalmaha soo socda.
Manchester, London, Madrid iyo Milan ayaa la sheegay inay ku jiraan liiska meelaha uu ku wajahan yahay , iyadoo la isla dhexmarayo in Manchester United , Tottenham Hotspur , Real Madrid iyo AC Milan ay dhamaantood xiiseynayaan heshiisyada bishaan.
Alvarez ayaa lagu xamanayaa in qandaraaskiisa lagu burburin karo 17 milyan ginni, taasoo ah shaqsi soo jiidasho leh marka loo eego awooda Alvarez iyo horumarkii ugu dambeeyay ee xulka Argentina.